China Gasi Mutengo LED Chiratidzo Kugadzira uye Fekitori |AVOE
Chiratidzo che LED chinogona kubatsira magasi kubudirira muzvinangwa zvavo zviviri zvikuru:
1. Kukwezva Vashanyi kubva munzira kuti ive yavo chiteshi chemafuta.
2. Dhiraivha Traffic kubva pombi yegesi muchitoro chekuwedzera kutengesa.
Kune akawanda masaini e LED sarudzo dzekusarudza kubva.Kunyangwe iwe uri mumugwagwa mukuru kana kuti uchida kuonekwa zviri nyore kubva pakati, AVOE LED Displays inogona kuwedzera kuoneka kwako.Tine magasi emitengo yekuchinja, pombi topper uye general meseji mabhodhi.
Nekushandisa zviratidzo zvekutengesa unogona nyore kuchengetedza vatengi vakagadziridzwa nemitengo chaiyo.Aya marudzi ezviratidzo ari nyore kushandisa, saka zviri nyore kuchinja mitengo yemafuta nekukasira.Kana paine chero zvakakosha zvinopihwa uye kukwidziridzwa, zvakafanana zvinogona kuratidzwa kuburikidza nekushandiswa kwezviratidzo zvedu zve LED nekudaro zvichigadzira fungidziro inogara kwenguva refu pane angangoita mutengi.Izvi zviratidzo zve LED zvinouya muhukuru hwakawanda.
Chiratidzo chemutengo wegesi we LED chinoonekwa zuva rese ... nehusiku.
Iyo yakaderera-kuchengetedza sezvazvinogona kuva.
Vanhu vari mukuziva vanozoziva kuti urikuitira hanya zvakatipoteredza.
Iwe unogona kuita kuti igadziriswe kune yako yakasarudzika zvaunoda.
Zviratidzo zve LED ndezvemazuva ano.
Gasi Mutengo we LED Chiratidzo, Gasi Electronic Mutengo Digital LED Zviratidzo
A Chokwadi Superior Digits Gasi Mutengo Shandura Solution
Kubva pakudzora kupenya kusingaenzaniswi kusvika pakusimba kwesimba repamusoro, AVOE inovavarira kuvaka akanakisa mutengo wegasi zviratidzo.
Kubudirira kwe LED
Nekuda kweiyo tekinoroji nyowani, yedu LED gasi mutengo zviratidzo zvakachipa uye zvakachipa kuchengetedza, tisingataure kupenya uye kureba kupfuura echinyakare neon marambi, saka iwe unogona kuona bhizinesi rako kubva mamaira kure, masikati kana husiku.Vatengi vanogona kuzorora vaine chokwadi chekuti mutengo wako uri-ku-zvino uye uri nyore kuona, uye unogona kuzorora uine chokwadi chekuti varikupa iyo yakanakisa sevhisi.
AVOE ine zvivakwa zvakakodzera uye midziyo yekugadzirisa zvizere shanduko yako yedhijitari gasi mutengo.Kubva pakukura kusvika kune ruvara, isu tichagadzira tsika ye LED backlight zviratidzo zvinoenderana nezvako zvirevo.Boka redu rakashongedzerwa nevanhu vese vanodiwa nevagadziri uye vagadziri, uye kunyangwe iwe uchitova nedhizaini kana kuti uri kugadzira imwe yako, takagadzirira kutora chero nhanho.
Tarisa pazasi- tinopa akawanda mavara, sarudzo uye zvigadziriso kuti zvienderane nezvaunoda iwe pachako.
· Yakanakisa Hunhu & Yakaderera Mitengo
· Saizi Yese Ari muStock NeKukurumidza Kutumira
· Yakananga-kubva kune-mugadziri mitengo.
· Kugona kudzora uye kuchinja anosvika masere mayunitsi ane imwechete isina waya kure
· Daisy-cheni inosvika masere mayunitsi uchishandisa imwechete controller bhokisi
· Kuiswa kuri nyore, nesimba rinokurumidza uye chiratidzo chekubatanidza
Gasi Mutengo LED Chiratidzo / Gasi chiteshi chiratidzo / Gasi chiteshi LED mutengo kuratidza / Petrol chiteshi LED zviratidzo
Ruvara: Tsvuku, Amber, Yero, Green, Blue, White
Digit Height: 6'', 8'', 10'', 12'', 15'', 18'', 20'', 22'', 32'', 36'', 40'', 48'', 60' ', 64'', 72',etc.
Digit Design: 7 segment modules yakavharwa neglue, inosvika IP65 isina mvura giredhi, ine
guruva mumvuri unoita kuti ma LED ashande zvakajairika nguva dzese.
Kudzora Kupenya: Auto dimming nekupenya sensor
Ratidza Dimming: Pamusoro pe5 mazinga e otomatiki intensity kugadzirisa
Kutarisa kona: Yakachinjika: 60 ° -120 °, Yakatwasuka: 60 ° -120 ° kana customized
Kuwana Sevhisi: Kumberi kana kumashure kwakavhurika
Tenzi/muranda: Single sided or double sided, master/varanda varipo
Cabinet Material: Iron cabinet kana aluminium alloy frame
Mvura Isingapindi: IP53 ine aluminium alloy frame, IP65 ine iron cabinet
Kukurukurirana kwePC: RS232/485;LAN(TCP/IP) ine tambo kana isina waya,mutengi anogona kusarudza
Nhaurirano Distance: Max.15 metres yeRS232, 1200 metres yeRS485/422
Remote Control Type: RF remote control (Yakajairwa 6 mabhatani kana LCD remote controller)
Inoenderera Kushanda Nguva: Unlimited
Hupenyu hwema LEDs: >100,000 maawa
Kuisa nzira: Kurembera, kukwirisa kana dhizaini yega yega
Kushanda Tembiricha: -40ºC ~ 75ºC
Ratidza Format: 8.88, 8.888,8.888, 8.88 9/10, 88.88, 88.888 nezvimwe.
Gasi Mutengo we LED Sign Control system
LED Gasi Mutengo Zviratidzo
Yedu LED gasi mutengo mhinduro dzakagadzirwa kune yakanyanyisa mwero, ichipa iyo indasitiri yakanyanya kusimba, inonzwisisika manhamba emitengo zviratidzo.
Standard LEDs inowanikwa muRed, Green.
Ma LED anowanikwa mubhuruu nechena nekukumbira.
Cash / Chikwereti manhamba mhinduro dziripo.
Mupumburu Gasi Mutengo Zviratidzo
Mitemo yakawanda yeguta inorambidza zviteshi zvepeturu kushandisa zviratidzo zvemitengo yemagetsi emagetsi e LED.Vamwe vatengesi vanotsvaga zvisingaperi, zvehupfumi mhinduro kune avo ekunze mutengo zviratidzo.Chero zvazvingaitika, isu tinopa iyo indasitiri chete yechokwadi yemagetsi kupenya mhinduro.
Mavara akajairwa muWhite paBlack, White paRed, White paGreen, White paBlue.
Shandisa mavara esangano rako.Made-to-order color sarudzo dziripo.
Vazhinji vatengesi vemafuta vanopa mutengo wekuderedzwa kune vatengi vemari.Mari / kiredhiti gasi mutengo zviratidzo zvinokutendera kuti uchinje nyore pakati pemitengo miviri yakasiyana mukati menguva yakatarwa.
Standard LEDs inowanikwa mutsvuku, girini.
Tenderedza mitengo miviri yechigadzirwa chimwe chete.
LED Pombi Pamusoro Zviratidzo
Yedu LED Pump Yepamusoro zviratidzo zvinopa nzira iri nyore yekuratidza mitengo yemafuta papombi.
8” manhamba anowanikwa.
Inowanikwa mutsvuku kana girini LEDs.
Kugona kudzora uye kushandura kusvika ku8 unit ine imwechete isina waya kure
Daisy-cheni inosvika 8 mayunitsi uchishandisa imwechete controller bhokisi
Zvakapfuura: Pharmacy Cross LED Display
Zvinotevera: Kunze Kwakazara Ruvara Kaviri Madivi Taxi Roof LED Ratidza P4
7 Chikamu Led Gasi Chiratidzo
Gasi Price Led Sign
Led Gasi Mutengo Chiratidzo
Led Oiri Mutengo Chiratidzo
Kunze 8888 Led Gasi Mutengo Chiratidzo
Kunze Led Chiratidzo
Led Sign Led Screen Kunze Led Display Kunze Led Screen Led Display Screen Led Display